Sheekadii Ciisay Qoreen | Carruurtaada Wax Bar
Sheekadii Ciisay Qoreen
Maad u jeeda nimanka sawirka ku jira?— Magacyadooda waa Matayos, Markos, Luukos, Yooxanaa, Butros, Yacquub, Yuudas iyo Bawlos. Nimankan waxay noolaayeen waqtigii nebi Ciise oo sheekadiisii bay qoreen. Bal aan wax ka sii baranno.
Maxaad nimankan ka taqaannaa?
Nimankan saddex ka mid ah waxay ahaayeen rasuullo uu Ciise doortay inay la wacdiyaan. Saddexda laga hadlayo ma taqaannaa?— Waxay ahaayeen Matayos, Yooxanaa iyo Butros. Rasuulka Matayos iyo rasuulka Yooxanaa nebi Ciise si fiican bay u yaqaaneen. Midkood walbana wuxuu qoray buug Ciise noloshiisii ka hadlaya. Rasuulka Yooxanaa buug la dhaho Muujintii buu qoray. Wuxuuna qoray saddex warqadood oo loogu yeero Yooxanaa Kowaad, Yooxanaa Labaad iyo Yooxanaa Saddexaad. Rasuulka Butros wuxuu qoray labo warqad oo ka mid ah Kitaabka. Waxaa la yiraahdaa Butros Kowaad iyo Butros Labaad. Butros warqaddiisa labaad wuxuu ka hadlay markii uu Yehowah samada Ciise kaga hadlay oo yiri: “Kanu waa Wiilkayga aan jeclahay oo aan ku faraxsanahay.”
Nimanka kale oo sawirka ku jirana buugagga ay qoreen bay Ciise noloshiisii naga baraan. Mid ka mid ah waa Markos. Markii Ciise la xirayay waxaa dhici karta inuu la joogay oo uu wax walba arkay. Mid kalena waa Luukos. Wuxuu ahaa dhakhtar waxana laga yaabaa inuu Kirishtaan noqday markuu Ciise dhintay kaddib.
Kitaab qorayaasha kale ad sawirka ka aragtid laba ka mid ah waa walaalihii nebi Ciise oo ka yaraa. Magacyadooda ma taqaannaa?— Yacquub iyo Yuudas baa la yiraahdaa. Ugu horreyn Ciise ma aamminsanayn. Waxayba u maleeyeen inuu yaraa waashay. Laakiin markii waqti laga soo wareegay Ciise way aammineen oo Kirishtaan bay noqdeen.
Ninka ugu dambeeya waa Bawlos. Intuunan Kirishtaan noqon Sawlos baa la oran jiray. Kirishtaanka wuu necbaa aad buuna u xumeyn jiray. Haddaba ma taqaannaa sababtuu Bawlos Kirishtaan u noqday?— Bawlos oo maalin jidka safrayay cod baa samada kala hadlay oo ku yiri: ‘Maxaad u dhibtaa kuwa ii rumaystay?’ Ciise codkiisii buu ahaa! Bawlos markaa kaddib wuu is beddelay oo Kirishtaan buu noqday. Wuxuu qoray Rooma ilaa Cibraaniyada oo ah 14 buug oo Kitaabka ka mid ah.
Waa inaan maalin walba Kitaabka akhrino. Waxyaalo badan baan Ciise ka barannaa markaan Kitaabka akhrino. Miyaad jeclaan lahayd inaad nebi Ciise wax ka sii baratid?—
2 Butros 1:16-18
Markos 3:21; 14:51
Falimaha Rasuullada 9:1-18
Rasuulladee baa nebi Ciise wax ka qoray?
Kitaabka qorayaashiisa labadee baa Ciise walaalihiis ahaa?
Bawlos sidee buu Kirishtaan u noqday?
Wadaag Wadaag Sheekadii Ciisay Qoreen